Zeorzia: Hiaraka hatory amin’i Shorena ve ianao? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Septambra 2018 1:36 GMT
Vakio amin'ny teny русский, Français, Swahili, 简体中文, 繁體中文, বাংলা, Español, English
Ity fandaharana ity, izay voalohany amin'ny karazany sy natolotr'i Shorena Begashvili, mpilatro Zeorziana teo taloha, dia nahazo fanehoan-kevitra maro tao amin'ny Aterineto, tao ny tsara ary tao ny ratsy. Mazava ho azy fa faly ilay bilaogera NightGravity .
Nanaiky ny rehetra fa mila ny fandaharan'ny fahitalavitra momba ny fananahana i Zeorzia, ary nikendry ny endriky ny fandaharana ny ankamaroan'ny fanehoan-kevitra miiba, toy ity tsikera avy amin'i lukrenc ity .
Namoaka lahatsoratra maro momba ity fandaharana ity ary naneho hevitra momba ny fizarana tsirairay ilay bilaogera malaza Zeorziana Tomushka. Nitsikera ihany koa ny famokarana izany izy.
Nitarika fanadihadiana an-tserasera mihitsy aza i Lishtota tamin'ny fanontaniana hoe: “Rahoviana ny fandaharana ” Alina iray miaraka amin'ny Shorena ” no ho foanana?”
Gaga ny bilaogera iray hafa, Giorgi Benashvili fa tsy nisy ny fanehoan-kevitra nanohitra mafy ity fandaharana ity, indrindra fa efa niandry ny fanafintohinana ny mpamolavola sy ny mpamokatra izany.
Raha ny marina, nahatonga ny maro hieritreritra ny tsy fisian'ny fanehoan-kevitra nanohitra izany fa vonona ho amin'ny fandaharana toy izany ny fiarahamonina, na farafaharatsiny ireo izay naneho hevitra an-tserasera. Nitaraina ny lahatsoratra marobe nivoaka tamin'ny bilaogy sy ny sehatra fanakalozan-kevitra fa tsy ampy fampianarana ity fandaharana ity, araka ny fanamarihan'ity fanehoan-kevitra miiba ity .
12 Aogositra 2021Azia Afovoany sy Kaokazy
24 Jolay 2021Azia Afovoany sy Kaokazy